Muxuu ka yiri Madaxweynaha Real Madrid ee Florentino Pérez barbarihii ay xalay la galeen Real Betis? – Gool FM
Muxuu ka yiri Madaxweynaha Real Madrid ee Florentino Pérez barbarihii ay xalay la galeen Real Betis?
(Madrid) 03 Nof 2019. Madaxweynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Pérez ayaa carro xoogan ka muujiyay barbarihii ay xalay la galeen naadiga Real Betis.
Kooxaha Real Madrid iyo Real Betis ayaa dhibcaha ku qeybsaday garoonka Santiago Bernabeu, kaddib markii ay ku kala baxeen barbaro 0-0 ah, kulan ka tirsanaa horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Shabakada “Defensa Central” ayaa soo warisay in Madaxweynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Pérez uu si weyn kaga carrooday garsoorihii xalay maamulayay ciyaarta, sababa la xiriira inuu iska indho tiray rigooro ay Los Blancos u qalantay in lagu abaal-mariyo daqiiqadihii ugu dambeeyay ee dhamaadka dheesha.
Garsoorka ciyaarta ayaa iska diiday in Real Madrid uu ku abaal-mariyo rigoore kaddib markii uu mid ka mid ah xiddigaha Real Betis si cad gacanta ugu taabtay kubadda gudaha xerada ganaaxa, balse ugu dambeyntii looma xisaabinin, kaddib markii uu garsooraha ku laabtay aalada VAR si uu u daawado.
Si kastaba ha noqotee, Florentino Pérez ayaa aaminsan in garsoorkii ciyaarta ee xalay uu dhaawacay Real Madrid isla markaana uu door weyn ka ciyaaray in ciyaarta ay ku dhamaato barbaro 0-0 ah, taasoo sababtay in Real Madrid ay iska qasaariso laba dhibcood muhiim ah, xilli Barcelona ay guuldarro ay kala kulantay naadiga Levante.
Suxufi caan ah oo sheegay in maalmihii Unai Emery ee Kooxda Arsenal ay soo dhammaadeen iyo weliba xilliga la cayrin doono